VaMutambara: VaMugabe Havakundi VaTsvangirai Chero Ipi Sarudzo
Mutevedzeri wemutungamiri wehurumende, VaArthur Mutambara, vanoti veruzhinji havafanirwe kuisa hudzamu pamshoko ari kubva kuZanu PF nemutungamiri wayo, VaRobert Mugabe, ekuti bato iri rakagadzirira kupinda musarudzo gore rinouya.
VaMutambara vati zviri pachena kuti sarudzo dzikaitwa, MDC inotungamirwa naVaMorgan Tsvangirai, inokuda bato raVaMugabe.
Vachitaura paAfrica University neChitatu semunyarikani pahurongwa hwekupemberera “Black History Month” iyo inoitwa gore rega rega zvukuru kuAmerica mukucherechedza mabasa evanhu vatema pasi rose, VaMutambara vati VaMugabe pavanenge vachitaura nezvekuti vakagadzirira sarudzo chero nguva, vanenge vachida kufadza vatsigiri vavo kunyange hazvo vachiziva kuti havafi vakakunda VaTsvangirai musarudzo dzakachena. VaMutambara vatiwo muZanu PF mune makakatanwa anotyisa.
Vati sarudzo dzikaitwa chero nguva sezviri kutaurwa naVaMugabe, pasati pava nebumbiro idzva remitemo yenyika, VaMugabe vanokundwa, nyika yobva yadzokera zvakare kumhirizhonga yemuna 2008. Vati sarudzo idzi dzikaitwa iye zvino sezviri kutaurwa, Zanu PF inowana zvikamu gumi nezviviri kubva muzana, MDC yaVaTsvangirai ichiwana zvikamu makumi masere nezvisere kubva muzana.
VaMutambara vatiwo VaTsvangirai vakataurawo mashoko ekuti bato ravo rakagadzirira kuita sarudzo chero nguva, vakati vanhu vasateerere mashoko aya zvakare, sezvo kutaura kwakadai kuri kwekuda kufadza vatsigiri vebato iri, sezvo vamiriri veparamende, pamwe nemakurukota ehurumende emapato ose, vasingadi kuti mabasa avo agumisirwe panzira nekuita sarudzo iye zvino. Vati chinodiwa pari zvino kuti pave nekugadzikana uye kuti zvinhu zvinoita kuti sarudzo dziitwe pasina mhirizhonga, zvinge zvagadziriswa munyika. Vati sekuona kwavo, sarudzo dzingangoitwa mugore ra 2012 kana 2013.
VaMutambara vakurudzira vana muzvinafundo kuti vapinde munyaya dzezvematongerwo enyika, sezvo kusina vanhu vakadzidza vakawanda vari kuita zvematongerwo enyika.
Vaimbove munyori mukuru mubato reZanu PF, vakadzingwa mubato iri vakazoumbawo bato ravo reZimbabwe Unity Movement, VaEdgar “Two-Boy” Tekere, vatiwo vafara nemashoko aVaMutambara.
Asi mumwe mudzidzisi wepaAfrica University, VaDonan Gwashu, vati mashoko aVaMutambara ange ari ekungoda chete kuzvitutumadza, pamwe nekuzviratidza kuvanhu semunhu akadzidza zvikuru. VaGwashu vati VaMutambara vanoratidza kuti havasi kuziva zviri kunyatsoitika muvanhu vavanogara navo.
Mutevedzeri waChancellor weAfrica University, Professor Fanuel Tagwira, vatenda zvikuru VaMutambara nekusiya mabasa avo akawanda vachiuya kuzotaura pamusoro pezvinhu zvakakosha pamhemberero dzavo.
Gavhuna weManicaland, VaChris Mushowe, avo vange vakatarisirwa kupawo mashoko avo, vakundikana kuuya. Vamwe vange vari pamusangano uyu vanosanganisira Ishe Mutasa, vakuru vemachechi, mabhizinesi uye vadzidzi vepa Africa University.
Nyaya ina Loidharm Moyo